जिसस प्रमुख छान्न झापा एमालेमा गुटगत चलखेल
झापा, २४ साउन । जिल्ला समन्वय समिति झापाको प्रमुख कसलाई बनाउने भन्ने बिषयमा नेकपा एमाले भित्र गुटगत चलखेल सुरु भएको छ । साउन ३१ गते हुने निर्वाचन प्रमुखको टुङ्गो लगाउन
घरको छतमा कुखुरा पालेर मनग्य आम्दानी
राधिका आचार्य बिर्तामोड, २१ साउन । झापा अर्जुनधारा नगरपालिका ५ का राजकुमार श्रेष्ठले घरको छतमा कुखुरा पालन गरेर मनग्य आम्दानी गरिरहेका छन् । उनले कुखुरा पालन व्यवसायबाट खर्च कटाएर बार्षिक
सुधार केन्द्र कि यातना गृह?
रोमन आचार्य मेचीनगर । पूर्वी नाका कार्करभिट्टाको एउटा सुधार केन्द्रमा अघिल्लो साता भएको घटनाले सुधारकेन्द्र प्रति प्रश्न खडा भएको छ । स्वतन्त्र प्रतिष्ठान नेपाल नामक सुधार केन्द्रमा गत शुक्रबार राति मेचीनगर
तेजन खड्का मोरङ , १९ साउन। पूर्वमा हुने सौन्दर्य प्रतियोगिताहरु पछिल्लो समय विवादमा तानिदै गएका छन् । पछिल्लो समय भईरहेका यस्ता प्रतियोगिताहरु प्रतिभाको खोजी गर्ने माध्यम नभएर कमाई खाने भाडो
तारामणि सापकोटा झापा, १७ साउन । विद्यार्थीको अवरोधले मेची बहुमुखी क्याम्पस भद्रपुरको स्वायत्तताको कार्यक्रम संकटमा परेको छ । स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियनले क्याम्पसको स्वायत्तताको खारेजीको माग गर्दै आन्दोलन सुरु गरेपछि स्वायत्तताको
जनयुद्धमा कमाण्डर, अहिले चन्द्रेश्वर बाबा !
तारामणि सापकोटा झापा, १४ साउन । माओवादी जनयुद्ध कालका होल टाइमर (पूर्णकालिन) कार्यकर्ता यतिबेला जट्टा पालेका गेरुवस्त्रधारी बाबा भए भन्दा पत्याउन गाह्रो पर्ला । तर, झापा मेचीनगर–३ (साबिक बाहुनडाँगी) तेलपानी
सम्बन्ध विच्छेद गरेकी श्रीमतीलाई दवावमा क्रिया गर्न लागइयो
सुशिला संग्रौला बिर्तामोड,२४ असार । छोडपत्र (डिभोर्स) पछि काजकिरिया कस्तो बिडम्बना । हाम्रो समाज अझै पनि १८औं शताब्दीमा रहेछ भन्ने पुष्टि भएको छ । अर्जुनधारा नगरपालिका निवासी ४८ वर्षीय देवीमाया
किन हार्यो झापामा काँग्रेस ?
झापा, २२ असार । २०४६ सालपछि झापा कम्युनिष्टहरुको किल्ला मानिदै आएको थियो । तर, त्यो किल्ला दोस्रो, तेस्रो निर्वाचन पछि काँग्रेसले भत्काउँदै गएको थियो । तर, यस पटकको निर्वाचनमा काँग्रेसले
झापाको गौरादहमा काँग्रेसले कसरी भत्कायो एमालेको किल्ला ?
झापा, २१ असार । नेपाली काँग्रेसले नेकपा एमालेको किल्ला मानिएको झापाको गौरादह नगरपालिका बिजयी बनेको छ । पंञ्चायतकालदेखिनै वामपन्थीको आधार क्षेत्र मानिएको गौराहद यस पटक काँग्रेसले भत्काएको छ । पहिलो
झापा, २ कार्तिक । तीन दिनदेखि लगातार परेको वर्षाका कारण जिल्लामा पाक्नै लागेको धानबालीमा ठूलो